China Boron Trifluoride (BF3) Ukukhiqiza kanye nefektri | I-Taiyu
IBoron Trifluoride ≥ 99.5%
Umoya ≤ 4000 ngomzuzu
I-Silicon Tetrafluoride P 300 ppm
Isibabule Dioxide ≤ 20 ppm
SO4¯ P 10 i-ppm
I-Boron trifluoride iyinhlanganisela engaphili nefomula yamakhemikhali i-BF3. Ugesi ongenambala, onobuthi futhi ongaqandayo ekamelweni lokushisa kanye nengcindezi, futhi ubhema emoyeni oswakeme. IBoron trichloride iyasebenza kakhulu. Izobola ngokuqhuma lapho ifuthelana noma ixhumana nomoya omanzi. Izobola yenze intuthu enobuthi neyonakalisayo (i-hydrogen fluoride). Lapho ibolile, izokhiqiza intuthu enobuthi we-fluoride futhi isabele ngodlame ngezinsimbi nangokwemvelo, Ingonakalisa ingilazi uma kubanda. Isetshenziswa ikakhulu njengesikhuthazi ekuphenduleni okuphilayo, njengokufakwa kwe-esterification, i-alkylation, i-polymerization, i-isomerization, i-sulfonation, i-nitration, njll .; njenge-antioxidant lapho iphonsa i-magnesium nama-alloys; yokulungiselela i-boron halide, i-elemental boron, i-borane, i-borohydride Izinto eziphambili ezisetshenzisiwe ze-sodium, njll.; futhi ekuphenduleni okuningi kwemvelo nemikhiqizo ye-petroleum, njengesikhuthazi sokuphendula kwe-condensation; I-BF3 nezinhlanganisela zayo zisetshenziswa njengama-agent okuphulukisa kuma-epoxy resins; ingasetshenziswa njengezinto zokusetshenziswa zokulungiselela ama-preforms we-fiber fiber; it is ikakhulukazi esetshenziswa embonini ye-elekthronikhi Isetshenziswa njenge-P-type dopant, umthombo wokufaka we-ion kuyizinhlayiyana negesi yokuqopha amandla ye-plasma; anti-oxidant lapho kusakazwa i-magnesium ne-alloy. Umkhiqizo wegesi wamabhodlela ugesi ogcwalisa umfutho ophakeme, futhi kufanele usetshenziswe ngemuva kokuncipha nokucindezela. Amasilinda kagesi ahlanganisiwe anomkhawulo wokuphila kwensiza, futhi wonke amasilinda kagesi aphelelwe yisikhathi kufanele athunyelwe emnyangweni ukuze kuhlolwe ukuphepha ngaphambi kokuba asetshenziswe. Imikhiqizo yegesi esemabhodleleni kufanele ihlungwe futhi ifakwe phakathi nokuhamba, ukugcinwa nokusetshenziswa. Igesi evuthayo negesi esekela umlilo akumele ihlanganiswe ndawonye, ​​futhi akufanele ibe seduze kwamalangabi avulekile nemithombo yokushisa, futhi kufanele igcinwe kude nomlilo, i-wax ye-oyela, ukuchayeka elangeni, noma ukuphonswa kabusha. , Ungashayi, ungagadli noma ugobe isilinda segesi, futhi ungalayishi noma wehlise kanzima.
I-BF3 ingasetshenziswa njenge-organic reaction catalyst, efana ne-esterification, i-alkylate, i-polymerization, i-isomerization, i-sulfonate, i-nitration. Izinto zokwenza i-boron halide, i-element boron, i-borane, i-sodium borohydride.
Ukufakwa kwe-Ion kanye nokuphambuka kokukhiqizwa kwesekethe elihlanganisiwe ledivayisi ye-semiconductor.
IBoron Trifluoride BF3
Ukugcwalisa Okuqukethwe / Cyl
Isilinda Tare Isisindo
1. Ifektri yethu ikhiqiza i-BF3 kusuka kuzinto ezibonakalayo zekhwalithi ephezulu, ngaphandle kwentengo ishibhile.
2. I-BF3 ikhiqizwa ngemuva kwezinqubo eziningi zokuhlanzwa nokulungiswa efektri yethu.Uhlelo lokulawula oluku-inthanethi luqinisekisa ubumsulwa begesi kuzo zonke izigaba.Umkhiqizo ophelile kufanele uhlangabezane nezinga.
3. Ngesikhathi sokugcwaliswa, isilinda kufanele somiswe isikhathi eside (okungenani ama-16hrs), bese siyasusa isilinda, ekugcineni siyisuse ngegesi yoqobo.Zonke lezi zindlela ziqinisekisa ukuthi igesi ayihlanzekile kusilinda.
4.Sibe khona emkhakheni weGesi iminyaka eminingi, ulwazi olucebile ekukhiqizeni nasekuthekeleni masiphumelele kumakhasimende’ trust, bayenelisa ngenkonzo yethu futhi basinikeze amazwana amahle.
Langaphambilini I-Boron Trichloride (BCL3)
Olandelayo: I-Carbon Monoxide (CO)
Izingxube ze-Ethylene Oxide & Carbon Dioxide